The Rohingya News Bank : ပလက်ဝ
Showing posts with label ပလက်ဝ. Show all posts
ပလက်ဝနဲ့ ရခိုင်သုံးမြို့နယ်တိုက်ပွဲ ၁၀ ရက်ကျော်ထိ ပြင်း ထန်ဆဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တပ်မတော်သားများကို တွေ့ရစဉ် ( အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ )
ပလက်ဝမြို့နယ်နဲ့ ရခိုင်မြို့နယ် မြို့နယ်သုံးခုထက်မနည်းမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ ၁၀ ရက်ကျော် လာ ပြီဖြစ်ပြီး အပြင်းအထန် ဆက်ဖြစ်နေဆဲပါ။ တိုက်ပွဲရန်ကနေ ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးရသူ အရပ်သားအရေ အတွက် ပိုတိုးလာသလို တိုက်ပွဲအတွင်း ပိတ်မိနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီအကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုသက်နိုင်က သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်က အောက်မီးလက်ဝ ကျေးရွာအနီးမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AAအဖွဲ့တို့ ကြား ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းက စတင်ပြီး မနေ့ကအထိ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားနေ တယ် လို့ AAအဖွဲ့ပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခ က ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, mm, တိုက်ပွဲပြင်းထန်, ပလက်ဝ, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်သုံးမြို့နယ်, သတင်း
တပ်မတော်နှင့် အေအေတို့ တနေ့တည်း ၄ မြို့နယ် တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်၊ နှစ်ဖက်အကျအဆုံးရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်သုံးခုအပါအဝင် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့မှာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ မနက် ပိုင်းကစလို့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်အေအေတို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ နှစ်ဖက် လက်နက်ကိုင်တွေက ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, တပ်မတော်, တိုက်ပွဲ, ပလက်ဝ, မင်းပြား, ရသေ့တောင်, သတင်း, မြောက်ဦးမြို့
ပလက်ဝမြို့နယ်အနီးက ကျေးရွာတွေမှာ တိုက်ပွဲဖြစ် တာကြောင့် ဒေသခံ တွေ မြို့ပေါ်ထွက်ပြေးလာ
ပလက်ဝမြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့ရစဉ် Photo: RFA
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းဘေးတစ်လျှောက်က ကျေးရွာတွေအနီးမှာ မြန်မာ တပ်မတော်နဲ့ AA အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀ နီးပါးဟာ ပလက်ဝမြို့ ပေါ်ကို ထွက် ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်နဲ့ သုံးမိုင်ကျော်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ ပိန္နဲတပင်ရွာ၊ ကြွေသောင်ရွာ၊ သဲမချောင်းဝရွာနဲ့ သဲ မချောင်းထဲ ကျေးရွာ လေးခုက အမျိုးသား ၁၇၈ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၀၂ ဦး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၃၈၀ ဟာ တိုက် ပွဲကြောင့် ပလက်ဝမြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးလာကြောင်း ခူမီး ချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကောင်စီ KACC ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဦးစောမြက RFA ကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, တိုက်ပွဲ, ပလက်ဝ, မြန်မာ့တပ်မတော်, သတင်း
AA အဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိ တဦး ကျဆုံး
ပလက်ဝမြို့ အ၀င်ဝကို တွေ့ရစဉ်
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ AA ရခိုင့်တပ်တော်တို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်က တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၁၂ က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိတယောက် ကျဆုံးပြီး၊ အခြားအဆင့်စစ်သားတချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ AA အဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခက .....
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, တပ်မတော်, ပလက်ဝ, ရခိုင်တိုက်ပွဲ, သတင်း, သေဆုံး
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဆုထူးစံ ဝန်ထမ်းတွေ အသက်ရှင် လျက်ရှိ
15 မေ 2019
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် ထဲက တွင်းကင်းအလောင်းရွာမှာ ဆုထူးစံ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ လမ်းလုပ် ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က အင်အား ၁၇၀နီးပါးရှိတဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်(AA) က ဝန်ထမ်း ၁၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ပလက်ဝ, ဖမ်းဆီး, ဘီဘီစီ မြန်မာ, လွတ်ပေး, သတင်း
ပလက်ဝက ရွာတချို့မှာ တပ်မတော်က ရွာသားတွေ ကို ပေါ်တာဆွဲနေတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ရွာသားတွေ ပြော
09 မေ 2019
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ကုလားတန်မြစ် အထက်ပိုင်းက မီးဇာ၊ သာယာကုန်း၊ ပြည်ထောင် အစရှိတဲ့ ရွာတွေနားမှာ စခန်းချခဲ့တဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တွေကနေ ရွာသားတွေကို ငွေကြေး အနည်းငယ်ပေးပြီး ရိက္ခာတွေ သယ်ယူဖို့ ပေါ်တာ ဆွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ အဲဒီဒေသက ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ပလက်ဝ, မြန်မာ့တပ်မတော်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း, ပေါ်တာဆွဲ
AA က ခူမီးချင်းလူမျိုး ၅၂ ဦးကို ခေါ်ဆောင်သွားမှု အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
ရခိုင်တပ်မတော် AA က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂) ရက်နေ့တွင် ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ကင်း တလင်း (Kangtlang) ကျေးရွာ မှ ခူမီးချင်းတိုင်းရင်းသား (၅၄) ဦး အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ရှိ ၎င်းတို့စခန်းချရာနေရာ သို့ ကာယကံရှင်တို့၏ဆန္ဒသဘောထားမပါဘဲ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ၂ ဦးမှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ၅၂ ဦးကို ပြန်မလွှတ်သေး၍ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးရန် ခူမီးချင်းမျိုး
နွယ် စုများရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီက ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်း ဆို လိုက်သည်။
Labels: 2019, AA, mm, ကင်းတလင်းကျေးရွာ, ခူမီးချင်းလူမျိုး, ပလက်ဝ, သတင်း
မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ချင်းလက်ဝရွာသား ၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ်(၃)နှစ်စီချ မှတ်
နိရဉ္စရာ၊ ဧပြီ ၁၀/ ၂၀၁၉
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ချင်းလက်ဝကျေးရွာမှ မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ ၁၇(၁)(၂)ဖြင့် ဖမ်း ဆီးစစ်ဆေးခံနေရသည့် ဒေသခံ သုံးဦးအား ယနေ့ ဧပြီးလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပလက်ဝမြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင် ၃ နှစ်စီချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: 2019, mm, ချင်းပြည်နယ်, နိရဉ္စရာ, ပလက်ဝ, ထောင်ဒဏ်
ကုလားတန်စီမံကိန်းအကြောင်းပြပြီး AA အဖွဲ့ကို ထောက်လှမ်းကြောင်းပြောကြားချက် တပ်မတော် ငြင်းဆို
AA က ဆုထူးစံကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြမြေပုံကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားစဉ်
မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ အဆက်အစပ်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မဟုတ်တာကြောင့် ကုလားတန်စီမံကိန်းကိုအကြောင်းပြုပြီး AA ကို တပ်မတော်က ထောက်လှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက် တွေဟာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူး ချုပ် ဇော်မင်းထွန်း ကပြော ပါတယ်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA က ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က ပလက်ဝမြို့နယ်၊ တွင်းကင်းအလောင်း ကျေး ရွာ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံစီမံကိန်း၊ ပလက်ဝ-မီဇိုရမ် နှစ်လမ်းသွားကားလမ်း ဖောက် ရေး လမ်းလုပ်သား အမျိုးသား ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က မနေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ကုလားတန်, တပ်မတော်, ပလက်ဝ, သတင်း, အိန္ဒိယ, ဇော်မင်းထွန်း
စစ်ရေးလိုအပ်ချက်အရဆိုပြီး အေအေက ဆုထူးစံ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆက်ဖမ်းထား
ဧပြီလ ၂ ရက် ၂၀၁၉
ဆုထူးစံကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဟာ စစ်ရေး လိုအပ်ချက်အရဖြစ်ပြီး၊ အစိုး ရစစ်တပ်နဲ့ အဆက်အစပ်မရှိတာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် အေအေအ ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ဆုထူးဝန်ထမ်း, ပလက်ဝ, ဖမ်းဆီး, ဘီဘီစီ မြန်မာ
AA တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ပလက်ဝတံတားတည် ဆောက်ရေးနှင့်ကုလားတန်စီမံကိန်း အစိတ်အပိုင်း အချို့ ယာယီရပ်ဆိုင်းထား
By ထွန်းထွန်းမင်း On
Tue, 2019-03-26 Location
ရန်ကုန် Issue No.
No. 2095,Tuesday, March 26, 2019
AA တိုက်ခိုက်မှုများ ကြောင့် ပလက်ဝတံတားတည် ဆောက်ရေးနှင့် ကုလားတန်ဘက် စုံသုံးစီမံကိန်း အ စိတ် အပိုင်းအ ချို့ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း ချင်း ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ၀န်ကြီး ဦးစိုးထက်ပြောသည်။
ကုလားတန်မြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်ရေး သံပေါင်များ သယ်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘော ကို AA ကမီး ရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ကုလားတန်ဘက်စုံသုံး စီမံကိန်း အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို တိုက် ခိုက်ခြင်းကြောင့် ယခု လိုရပ်ဆိုင်း ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၀န်ကြီးကပြော သည်။
Labels: 2019, AA, mm, စီမံကိန်း, တံတား, ပလက်ဝ, သတင်း
နိုင်ကွန်းအိန်၊ 12 မတ်၊ 2019
AA တပ်မတော် (ရက္ခိုင့်တပ်မတော် - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန)
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ ရဲကင်းစခန်း တချို့ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် စခန်း တချို့ကို ပြန်လည်ရုတ် သိမ်းတာနဲ့ ရွှေ့ပြောင်း အင်အားဖြည့်တာတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝ မြို့ နယ်ဘက်မှာ တပ်မတော်ရဲ့ တပ်စခန်းကို ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA ဘက်က စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ စစ်သုံ့ပမ်းတချို့ ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ AA အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တိုက်ပွဲ, ပလက်ဝ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ့တပ်မတော်, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း
ဖမ်းခံရသူ ရဲစခန်းမှူးနဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး AA ပြန်လွှတ်
နိုင်ကွန်းအိန် ၊27 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ရခိုင့်တပ်မတော်ကနေဖမ်းဆီးထားတဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် သံထောင်ကျေးရွာ ရဲစခန်းမှူးနဲ့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတို့နှစ်ဦး ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ သာရေးခေါင်းဆောင် တွေကနေလာရောက်ရွေးယူဖို့ AAဘက်ကကမ်းလှမ်းလာပြီးနောက် အခုလိုပြန် လည်လွတ်မြောက်လာတာပါ။ အဖမ်း ခံရသူနှစ်ဦးအနေနဲ့ ညှင်းပန်းမှုမခံရပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု တော့ရှိနေတယ်လို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ရပ်မိရပ်ဖတဦးကပြောပါတယ်။ ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်က သတင်းပေးပို့ထား ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ချင်းပြည်နယ်, ပလက်ဝ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာစစ်တပ်, ရက္ခိုင့်တပ်မတော်, သတင်း
AA က ဖမ်းသွားတဲ့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့စခန်း မှူး ပြန်လွတ်လာ
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ် သံတောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချာဟော်နဲ့ စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် ဆလိုင်းဘီးဖာတို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာစဉ်
အခုလ ၂၂ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ရဲ့ ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ် သံတောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချာဟော်နဲ့ စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် ဆလိုင်းဘီးဖာတို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ဒီနေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်မှာ သူတို့ နေထိုင်ရာနေအိမ်တွေကို ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, ပလက်ဝ, ဖမ်းဆီး, ရက္ခိုင့်တပ်မတော်, သတင်း
သံတောင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ စခန်းမှူးကို AA ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို တွေ့ရစဉ်
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA က အခုလ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ် သံ တောင်ကျေးရွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးချာဟော်နဲ့ စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် ဆလိုင်းဘီးဖာတို့ကို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ရပ်မိ ရပ်ဖတွေက ဒီနေ့နီးစပ်ရာ ရွာတွေနဲ့ တောတွေထဲမှာ သွားရောက် ရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် မတွေ့ရဘူးလို့ ပြောပါ တယ်။
Labels: 2019, AA, mm, RFA Burmese, ချင်းပြည်နယ်, ပလက်ဝ, ရခိုင်ပြည်နယ်, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း
ပလက်ဝ သံတောင်ရဲစခန်းကို AA ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်ပြီး စခန်းမှူးနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား ဖမ်း ဆီးခေါ်ဆောင်သွား
ပန်လှအောင်(မြစ်မခ) 23 Feb 2019 | မြန်မာတိုင်းမ်နေ့စဉ်
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်ရှိ သံတောင်ရဲစခန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က AA မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကာ စခန်းမှူးနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သံတောင်ရဲစခန်းသည် ပလက်ဝမြို့နှင့်အလှမ်းကွာဝေးကာ လေးမြို့မြစ်ကမ်း နံဘေးတွင်တည်ရှိသော ရဲစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်တွင် သေနတ်သံ ခုနစ်ချက်ခန့်ကြားရခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ ထံမှ သိရသည်။
Labels: 2019, AA, mm, ချင်းပြည်နယ်, ပလက်ဝ, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း
ပလက်ဝမြို့နယ်ရဲစခန်းကို AA စီးနင်းတိုက်ခိုက်နှစ် ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆဲ
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)၊22 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ သံတောင်ကျေးရွာ (ဓာတ်ပုံ- ကိုတင်ထွန်းအောင်)
စစ်ရေးပဋိပက္ခတင်းမာနေဆဲဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ AA တို့အကြား ရခိုင် ပြည် နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝ မြို့နယ်ဘက်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးနေဆဲ ဖြစ်သလို တိုက်ပွဲအတွင်း အရပ် သားသေဆုံးမှုတွေ ဖမ်း ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေလည်း ဖြစ်ပွါးနေတာပါ။
Labels: 2019, AA, mm, ပလက်ဝ, မြန်မာ့တပ်မတော်, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်
22 ဖေဖေါ်ဝါရီ 2019
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (အေအေ) အင်အား ၁၀ဝ နီးပါးဟာ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ သံတောင်ရွာကို ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ရဲစခန်းက စခန်းမှူး ကို ခေါ်ယူ လက်နက်တောင်းခဲ့ပြီး စခန်းမှူးနဲ့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တို့ကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ချင်းပြည်နယ်, ပလက်ဝ, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရခိုင် တပ်မတော်
ပလက်ဝ က စစ်ရှောင် ၁၁ ဦးနဲ့ အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံကို မတရားအသင်းအက်ဥပဒေနဲ့ စွဲချက်တင်
ပလက်ဝမြို့နယ် ရှင်းလက်ဝ ကျေးရွာက စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ အမျိုးသား ၁၁ ယောက် အပါအဝင် ရခိုင် ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့က အိမ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံကို မတရားအသင်း (အက်) ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) ၊ ၁၇ (၂) တို့နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က ကျောက်တော်မြို့နယ် တရားရုံးက စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။
"မနေ့က တရားစွဲတင်တာ၊ ဖမ်းတုန်းက ၂၆ ယောက်ပါ။ ၁၃ ယောက်ကို ၁၇ (၁)၊ ၁၇ (၂) နဲ့ စွဲတင်တယ်။ ဖမ်းဆီးထားသူတွေရဲ့ လက်ထဲကတော့ ဘာမှမိတာ မရှိဘူး။
Labels: 2019, mm, တရားရုံး, ပလက်ဝ, ဖမ်းဆီး, ဘီဘီစီ မြန်မာ, ရခိုင်, သတင်း
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်
နိုင်ကွန်းအိန်၊ 18 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (ရက္ခိုင့်တပ်မတော် - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန)
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA တို့အကြား နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲနဲ့ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပိုပြီး အဖြစ်များလာနေပါတယ်။ မနေ့က ရသေ့တောင်မြို့နယ်ထဲမှာပဲ တိုက် ပွဲ(၃)ကြိမ် ဖြစ်ပွား ခဲ့သလို ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ဖက်မှာလဲ တပ်မတော်သားတွေ စီးနင်းလာတဲ့ အရပ်သား ကားတစီးကိုလဲ AA ဖက်က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ တယ်လို့ နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, စစ်ဘေးဒုက္ခသည်, ပလက်ဝ, ဗွီအိုအေ, ဘူးသီးတောင်, ရခိုင် တပ်မတော်, မောင်တော